ब्ल्याक ह्याट एसईओ के हो? Semalt बाट एसईओ आधारभूत
एसईओ (सर्च ईन्जिन अप्टिमाइजेसन) को संसारमा, विशेषज्ञहरूले कालो ह्याट एसईओ अभ्यासहरूको जोखिम विरुद्ध चेतावनी दिन्छन्। तर, ब्ल्याक ह्याट एसईओ के हो? यसले एसईओ अभ्यासलाई बुझाउँदछ जुन गुगलको वेबमास्टर नियमहरूको उल्ल .्घन हो। खोजी ईन्जिनको रूपमा , गुगलले अनुमतियोग्य एसईओको लागि वेबमास्टर दिशानिर्देशहरू स्थापित गरेको छ र एसईओ सन्दर्भमा के स्वीकार्न मिल्दैन। गुगलले यसको खोज इञ्जिन प्रयोग गर्दछ जुनसुकै नियमहरू उनीहरूले उपयोगी फेला पारे र बाह्यरेखा दिशानिर्देशहरूको उल्लंघन Google बाट साइट हटाउने कारण गर्दछ। नतिजा स्वरूप, कुनै पनि एसईओ विशेषज्ञले खोज इञ्जिन परिणामहरूमा प्रभाव पार्न सक्छ, जुन नराम्रो अभ्यास होइन। गुगलको उद्देश्य कुनै साईट फेला पार्नु हो र ठ्याक्कै यसको सामग्री वा यो के हो भनि निर्धारण गर्दछ। जे होस्, गुगलको व्यवसाय खोजमा सब भन्दा सान्दर्भिक वेबसाइटहरू निर्धारण गर्नु हो।
ज्याक मिलर, Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, व्याख्या गर्दछ कि यदि विकासकर्ताले उष्णकटिबंधीय फूलहरूको बारेमा साइट छ भने, Google उष्णकटिबंधीय फूल सम्बन्धित कुञ्जी शव्दहरूसँग त्यस्ता साइटहरूको अनुकूलन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
कालो टोपी एसईओ अभ्यासहरू
सामान्यतया, ब्ल्याक ह्याट एसईओ अभ्यासहरूले ब्याकलिinkक योजनाहरू वा गुगललाई जस्तै खोज ईन्जिनहरू छल गर्न रणनीतिहरू समावेश गर्दछ जुन साइटलाई वास्तविकतामा भन्दा केहि फरकको रूपमा लिन्छ। निम्नलिखित ब्ल्याक ह्याट एसईओ का उदाहरणहरू छन्:
ब्याकलिks्कहरू खरीद गर्दै वा अन्यथा ब्याकलिlin्कहरूको लागि मौद्रिक भुक्तानी (लि links्कहरूको लागि छुट प्रदान गर्ने सहित) प्रस्ताव गर्दै।
लिंक पिरामिडहरू - केहि अन्य वेबसाइटहरूमा ब्याकलिlin्कहरू प्रदान गर्न धेरै लिंकहरू निर्माण गर्दै।
वेब पृष्ठमा लुकेका पाठ सम्मिलित गर्दै, यसले किवर्डहरू, अदृश्य शब्दहरू र पृष्ठभूमिको जस्तो समान रंगको पाठको साथ समावेश गरिएको अत्यन्त साना पाठहरू समावेश गर्दछ।
भवन ढोका पृष्ठहरू। यी लिंकहरूलाई सन्दर्भित गर्दछ वेबसाइटलाई विभिन्न वेबसाइटहरूमा पुन: निर्देशित गर्नु अघि खोज इञ्जिनहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि।
प्रोक्सी सर्भरको प्रयोग वा दर्जनौं आईपी ठेगानाहरू उत्पादन गर्नको लागि वेबसाइटलाई धेरै वेब पृष्ठहरू जस्तो देखा पर्न ब्याकलिks्क प्राप्त गर्ने उद्देश्यका लागि।
अन्य वेबसाईटहरूबाट सामग्री नक्कल बनाउँदै एक भ्रम बनाउनु कि साइटसँग धेरै अपडेट र सामग्रीहरू छन्।
कालो ह्याट एसईओ का खतरहरु
ब्ल्याक ह्याट एसईओ अभ्यासहरूमा संलग्न हुने दुई जोखिमहरू छन्। सबैभन्दा पहिले, गुगलले कालो ह्याट एसईओ अभ्यासहरू अन्त्य गर्न यसको खोज एल्गोरिथ्ममा काम गरिरहेको छ। विज्ञहरू तर्क गर्छन् कि गुगलले यस उपक्रममा पहिले नै सफलता प्राप्त गरिसकेको छ। यसैले, ब्ल्याक ह्याट एसईओ साइटहरूले रैंकिंग गुमाउने जोखिम।
दोस्रो र अन्तिम खतरा हुने हुने सम्भावना कम छ तर यो अधिक गम्भीर खतरा हो। जब गुगलले ब्ल्याक ह्याट एसईओ अभ्यास गर्ने साइट स्थापना गर्दछ, तिनीहरूले साइटको र्या lower्कि rad कम क्रमिक रूपमा कम गर्न वा त्यस्ता वेब पृष्ठहरूलाई पूर्ण रूपमा सूचीत गर्ने निर्णय गर्न सक्दछन्। एक सूचीबद्ध वेबसाइट गुगल रैंकिंगमा कहिले पनि देखिने छैन।
सेतो टोपी एसईओ अभ्यास को फाइदा
एक साइटले अख्तियार र शक्तिमा निर्माण गर्न सक्छ ह्वाइट ह्याट एसईओ रणनीतिहरूमा समय लगानी गरेर जुन सबै खोज इञ्जिनहरूले स्वीकार्य छन्। एक साइट बिस्तारै क्रमशः बढ्नेछ तर प्राप्त रँक्सिन्स.जीग कायम राख्नेछ। साइटको एसईओ पनि पछिल्लो एसईओ अभ्यासबाट बनाउँदछ प्रत्येक पटक नयाँ सुरु गर्नुको सट्टा। अन्तत: साइटले जैविक खोजी परिणामहरूको शिखरमा पुग्न सक्छ र SEO को मर्मतमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। थप रूपमा, शीर्ष स्थान निर्धारण (कानूनी रूपमा प्राप्त) पहिलो स्थानमा स्तर निर्धारण भन्दा धेरै सजिलो काम हो।